नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal: nepal news
Showing posts with label nepal news. Show all posts
६ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आज बस्ने बैठकमा दुई वटा विधेयक प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
अहिले बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले पनि राष्ट्रियसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दैछन् । भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मन्त्री अर्यालले प्रस्तुत गर्न लागेको संसद् सचिवाललयले जनाएको छ ।
दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको हो ।
भक्तपुर नगरपालिका र क्यान्सर अस्पतालवीच अधिकार क्षेत्रको विवाद
By नेपाली कान्छा on 9:01 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
६ भदौ, काठमाडौं । गत साउन २८ गते भक्तपुरको स्थानीय मजदुर दैनिकले ‘स्वार्थको जालोमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल’ भन्ने समाचार लेख्यो । समाचार प्रकाशन भएलगत्तै अस्पतालका कर्मचारीहरुले खैलाबैला मच्चाए ।
त्यसअघि मजदुर संगठन नै नभएको अस्पतालमा यसवीचमा मजदुर संगठन गठन भयो । अस्पतालमा भष्ट्राचार बढेको र व्यवस्थापन समितिको स्वार्थका कारण अतिआवश्यक मेशिनहरु समेत नल्याइएको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन गरे ।
कर्मचारी आन्दोलित भएपछि भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजाप्रति अस्पताल पुगे । गैरसरकारी संस्थाले अनियमितता गरेको भन्दै भक्तपुरका स्थानीयले अस्पताल घेराउ गरे । तर, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ सम्पर्कमा आएनन् ।
‘अस्पतालमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए । तर, व्यवस्थापन समितिका पधाधिकारी गायव भए, अप्रिय घटना होला भन्ने सम्भावना बढ्यो’ भक्तपुरका मेयर प्रजापति भन्छन्, ‘नगरपालिकाको जग्गामा रहेको अस्पतालमा अनियमितता हुदाँ नगरपालिकाले केही नगरेको जनगुनासो आएपछि हामीले त्यहाँ नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्यौं ।’
वि सं ०५८ सालमा भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरलाई चारवटा शर्त राखेर ५ रोपनी ४ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जग्गामा नै अस्पताल सञ्चालन भइरहेको थियो । विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा लोकेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा रहँदै आएका थिए ।
क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि नगरपालिका र भक्तपुर अस्पताल दुबैको गरी करिब साढे १५ रोपनी जग्गा प्रयोग भएको छ । यो अस्पताल ०५१ सालमा निर्माण भएको हो ।
शर्तहरुको पालना भएन : मेयर
अस्पताल सञ्चालन हुदैँ गएपछि अस्पतालविरुद्ध कर्मचारीहरुले विभिन्न गुनासाहरु गर्दै गए । अनियमितता तथा भष्ट्राचारको समाचार बाहिरिएपछि अस्पतालको सेवा नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुग्यो । भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरले पनि नगरपालिकासँग गरेको सम्झौता तोड्दै गयो ।
नगरपालिकाकासँग गरिएका चार शर्तहरु यस्ता थिए–
१. उपलब्ध गराइएको जग्गामा भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरले अत्याधुनिक सेवाहरु सुचारु गरी प्रयोग गर्न सक्ने ।
२. केन्द्रले सेवा दिन नसकी बन्द भएमा सो जग्गा र जग्गामा बनेको अचल सम्पतिमा स्वतः नगरपालिकाको स्वामित्व हुने ।
३. सो जग्गा अन्य व्यक्ति या संस्थालाई भाडामा दिन या हक छाड्न वा हस्तान्तरण या बिक्री गर्न नपाइने ।
४. नयाँ संरचनाहरुको निर्माण लागि नगरपालिकासँग नियम अनुसार स्वीकृति लिनुपर्ने ।
यी चारवटा शर्त पालना नगरेपछि नगरपालिकाले अस्पताल व्यावस्थापनको जिम्मा लिएको मेयर प्रजापति बताउँछन् ।
नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएलगत्तैको पहिलो बैठकले अस्पतालमा कार्यरत ४० जना कर्मचारीको बढुवा गर्‍यो भने १० जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ती दिइयो । ठेक्का प्रणालीबाट राखेका ३७ जना सफाइ कर्मचारीहरुलाई अस्पतालको मातहतमा राखियो ।
‘हामीले त भक्तपुर क्यान्सर केयरलाई जग्गा दिएका थियौँ । तर, अहिले उक्त संस्था त नेपाल अबुर्द रोग निवारण नामक गैरसरकारी संस्थासँग पो विलय भयो’ मेयर प्रजापति भन्छन्, ‘हामीले सम्झौता गर्दा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई हक हस्तान्तरण नगर्ने भनेका थियौँ । तर, यहाँ त शर्त नै मानिएन ।’
मेयर प्रजापतिको भनाइ अनुसार उक्त गैरसरकारी संस्थाले क्यान्सर अस्पताललाई ‘नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी भक्तपुर अस्पताल’ भनेर नयाँ नाम दिएको छ । अस्पतालमा काम गर्ने स्विपरलाई २६ हजार ५ सय पारिश्रमिक दिने कागजी सम्झौता गराएर १३ हजार ५ सय मात्र दिइएको छ ।
त्यस्तै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई अस्पताल मार्फत नभएर गैरसरकारी संस्थामार्फत तलब दिने व्यवस्था गरिएको मेयर प्रजापति बताउँछन् ।
‘न महालेखाले छुने, न अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने, उनीहरुले गैरसरकारी संस्थाको आडमा मनपरी गरे’ प्रजापति भन्छन्, ‘उनीहरुले सम्झौताविपरीत भवनहरु बनाए । नयाँ कार्यक्रम गर्दा नगरपालिकासँग स्वीकृती लिएनन्, त्यसैले सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न नयाँ व्यवस्थापन समिती बनाउनुको विकल्पै रहेन ।’
यसरी नियम मिचेर गैरसरकारी संस्थाले मनपरी गर्न थालेपछि त्यो नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नगरप्रमुख प्रजापति बताउँछन् । पुरानो व्यवस्थापन समितीलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा अटेर गरिएपछि बाध्य भएर यो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
मेयर प्रजापतिले अगाडि भने, ‘म त भन्छु, देशभरका एनजीओ र आइएनजीओहरुलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्छ । यसरी मनपरी छाडा छोड्न थाल्यो भने त यस्ता अनियमितताका घटना बढ्छन् ।’
पुरानो व्यवस्थापन समिति के भन्छ ?
यता, नगरपालिकाबाट गठित नयाँ व्यवस्थापन समितीले काम सुरु गरेपछि पुरानो व्यावस्थापन समितिले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यममा अनियमितताको समाचार आएको निहुँमा अस्पतालमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु अतिवाद भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा नगरपालिकाले गैरकानुनी काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीका महासचिव विमल होडा नगरपालिकाले नयाँ व्यवस्थापन समिति बनाएर गैरकानुनी काम गरेको बताउँछन् ।
पत्रिकामा भष्ट्राचारको समाचार आएकै भरमा आफूहरुलाई विघटन गर्नु षड्यन्त्र रहेको होडको तर्क छ । अस्पतालको संस्थापक टिमलाई नै हटाएर नगरपालिकाले प्रकिया मिचेको उनको जिकिर छ ।
होडा भन्छन्, ‘हामीलाई एकाएक हटाउनुको सट्टा कुनै साधारणसभा या छलफल गरेर हटाएको भए अर्कै कुरा, यसरी सीधै हटाउनु त सरासर अन्याय हो ।’
विवाद संसद र सर्वोच्च अदालतसम्म
प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले मंगलबार संसदमा बोल्ने क्रममा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमाथि नगरपालिकाले गरेको हस्तक्षेप अवैधानिक भएको भन्दै छानविन गर्न सरकारसमक्ष माग गरे ।
जवाफमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले वास्तविकता बुझेर छानविन गर्ने बताए ।
यसैवीच, भक्तपुर नगरपालिका र क्यान्सर अस्पतालको विवाद संसदमा मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउँदै महासचिव होडा भन्छन्, ‘हामीले अन्याय महसुस गरेर कानुनी बाटो अपनाएका छौँ ।’
तर, मेयर प्रजापति भने नगरपालिकाले कुनै गैर कानुनी काम नगरेको दाबी गर्छन् । गैरसरकारी संस्थाको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न नगरपालिकाले अस्पतालमा कुनै हस्तक्षेप नगरिकन व्यवस्थापनमा सहयोग मात्र गरेको प्रजापतिको तर्क छ ।
संघीयताले स्थानीय तहलाई ‘सरकार’कै रुपमा मान्यता दिइएको अवस्थामा आफ्नो नगरपालिकाभित्रको अस्पतालको व्यवस्थापनमाथि नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? योचाहिँ संघीयताका विज्ञहरुले जान्ने कुरा हो । आफ्नो नगरपालिकाभित्र भएको भ्रष्टाचार टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने भन्ने खालको तर्क मेयरले गरेका छन् भने अस्पताल प्रशासनचाहिँ यो घटनालाई गैरकानूनी हस्तक्षेप बताउँछ ।
क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर नगरपालिकावीचको अधिकारको यो लडाइँ पक्कै पनि अन्य स्थानीय तहका लागि समेत रोचक सन्दर्भ हुन सक्छ ।
बालिका बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्ष जेल सजाय
६ भदौ, उदयपुर । जिल्ला अदालत, उदयपुरले ६ वर्षीया बालिका बलात्कारको कसुरमा एक जनालाई १६ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
६ भदौ, पोखरा । लागूऔषध ब्राउनसुगरसहित प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका–२ का २६ वर्षीया रचना गिरी र ३८ वर्षीय विमल लामा रहेका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले लागूऔषधका ९ पोकासहित बिहीबार बागलुङ बसपार्कबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका दुवै जनालाई वडा प्रहरी कार्यालय बगरमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
विप्लवका नवलपरासी इञ्चार्जपछि जनसरकार प्रमुख समातिए
By नेपाली कान्छा on 8:26 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
६ भदौ, नवलपरासी । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नवलपरासी जिल्ला सदस्य एवं जनसरकार प्रमुख भनिएको प्रेमप्रसाद ढकाल पक्राउ परेका छन् ।
सुनवल नगरपालिका–१३, बडेरास्थित घरबाटै गएराति ढकाललाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय, पश्चिम नवलपरासीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका ढकाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा राखी आवश्यक अनुसन्धान थालिएको उनले बताए ।
पश्चिम नवलपरासीमा विप्लव समूहका अधिकांश नेताहरू यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् ।
विप्लव समूहका जिल्ला इञ्चार्ज सुमन ज्ञवाली यसअघि नै पक्राउ परी कारागारमा छन् भने पक्राउ परेका अन्य केही जिल्लास्तरका नेताहरूले विप्लव समूह परित्याग गरी धरौटीमा छुट्दै आएका पनि छन् ।
डोटीकी डेंगु संक्रमित महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु
By नेपाली कान्छा on 8:01 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
६ भदौ, डोटी । डोटीमा डेंगुको संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । डेंगु संक्रमित दीपायल सिलगढी नगरपालिका–६, थापलाकी ४२ वर्षीया छत्र मलासीको उपचारका क्रममा बिहीबार मृत्यु भएको हो ।
माया मेट्रो अस्पतालका विष्णु जोशीले डेंगुको संक्रमण अत्यधिक भएकाले मलासीलाई बचाउन नसकिएको बताए । ‘डेंगुसँगै स्क्रप टाइफसको संक्रमण मलासीमा देखिएको थियो’, डा. जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘डेंगुको संक्रमण धेरै भएकाले हामीले उहाँलाई बचाउन सकेनौं ।
जेलबाट छुटेलगत्तै चौकीदारलाई धम्की– १० लाख दिन्छौं कि सरुवा गरिदिऊ
By नेपाली कान्छा on 7:31 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
प्रहरीका अनुसार, फुल हसन अन्सारी जयशंकर साहको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटी ०७४ असोज ९ गते कारागारबाट छुटेका थिए । उनले वीरगञ्ज कारागारका चौकीदार शेख भोलासँग १० लाख रकम माग गरेका थिए । रकम नदिएमा सरुवा गराइदिने धम्की दिए पनि उनले पैसा पाएनन् ।
विष्फोटअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतलाई एसएमएस गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । फुल हसनले नै पटाका पड्काउन इनुस, सद्दाम र टाइगर भन्ने जौवादलाई प्रयोग गरेको खुल्न आएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शर्माले बताए ।
By नेपाली कान्छा on 7:11 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
६ भदौ, वीरगञ्ज । प्रहरीले वीरगञ्जबाट २ लाख ५० हजार अवैध भारु सहित भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ ।
भारत विहार वैशाली थाना लालगञ्ज पोष्ट खन्जाहा चौक बस्ने ३६ वर्षीय मिथिलेस कुमारलाई प्रहरीले बिहीबार अवैध भाररुसहित पक्राउ गरेको हो ।
By नेपाली कान्छा on 6:56 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
मन्त्रीको भ्रमण र पुरस्कारका लागि आवको पहिलो महिनामै रकमान्तर
६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच नेकपा सचिवालय बैठकमा बिहीबार भएको ‘भनाभन’ कै वरिपरि आजका दैनिक पत्रिकाहरू केन्द्रित भएका छन् ।
कान्तिपुरले ‘लाञ्छनामा उत्रिए नेपाल– ओली’ शीर्षक दिएर प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको कलहबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । ओली र नेपालबीच सचिवालय बैठकमै चर्काचर्की भएपछि बैठक अप्रिय बनेको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णले सर्वसम्मत ढंगले पार्टी चलाउन ओलीले प्रस्तावलगत्तै बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको उल्लेख गरेको छ । बैठकमा ओली, नेपालसँगै, प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले राखेका भनाइलाई अन्नपूर्णले जस्ताको तस्तै छापेको छ ।
नागरिकले स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि नेपालले स्वास्थ्य लाभको लागि दिएको शुभकामनासमेत अस्वीकार गरेको लेखेको छ । ‘ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यका विषयमा नेपालले नकारात्मक टिप्पणी गर्दै हिँडेको भन्दै शुभकामना अस्वीकार गरेका हुन्’ नागरिकले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि आजका पत्रपत्रिकाहरूले चासो राखेका छन् । अन्नपूर्णले प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै ओलीको शरीरमा एन्टिबडीको मात्रा बढी देखिएको लेखेको छ ।
कान्तिपुरले शरीरमा एन्टिबडीको मात्रा बढी देखिएकाले त्यसकाे निराकरणका लागि प्रधानमन्त्री सि‌ंगापुर गएकाे उल्लेख गरेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश रहेका बेला अब भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्ने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री सशरीर उपस्थित भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्थ्यो ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ लाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो व्यवस्था गरेको कान्तिपुर समाचारमा लेखिएको छ ।
आ.व.को पहिलो महिनामै रकमान्तर
आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनादेखि नै सरकारले रकमान्तर गर्न सुरु गरेको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार करिब ७ वटा फाइलबाट डेढ करोड निकासा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले निकासा रकम मन्त्रीको भ्रमणदेखि प्रधानमन्त्रीको नामको पुरस्कारमा खर्च भएको देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै कारोबारले लेखेको छ– सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै वित्तीय अनुशासनको नारालाई लत्याउँदै झण्डै २ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले साउन महिनामा ७ वटा फाइलबाट प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण तथा स्वागत खर्च, आर्थिक सहायता, भैपरी आउने खर्चलगायतका नाममा यो रकम निकासा गरेको हो । समाचार अनुसार, उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको रसिया भ्रमणका लागि पनि यही रकमान्तर गरिएको रकमबाट टिकट काटिएको पाइएको छ । यद्यपि, यादवको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि भ्रमण स्थगित गरेर टिकट रद्द गराइएको थियो ।
मानिसमा तीन प्रकारको अनुभूति हुन्छ । एक अनुभूति दुःखको हो, एक अनुभूती सुखको हो र एक अनुभूति आनन्दको हो ।
सुखको अनुभूति र दुःखको अनुभूति बाहिरबाट हुन्छ । जब बाहिर हामीले केही चाहन्छौं, प्राप्त गर्छौं तब सुख अनुभूत हुन्छ । हामीले जे चाहेका थियौं, त्यो पुरा भएन भने हामी दुःखी हुन्छौं । सुखी हुनु वा दुःखी हुन दुवै बाहिरी कुरामा निर्भर छ । बाहिरी जुन जगत छ त्यसको सम्बन्धमा हामीसँग दुई किसिमको अनुभूति हुन्छ, दुःखको वा सुखको ।
जस्तो कि तालमा लहर उठ्छ, लहर तालमा उठ्दैन । लहर हावामा उठ्छ र तालमा कम्पित हुन्छ । हावाको प्रभावमा, हावाअनुसार तालमा लहर उठ्छ । लहर उठ्नुको अर्थ हो ताल स्वयंमा बाहिर कुनै चिजबाट प्रभावित छ ।
हाम्रो चित्त बाहिरबाट प्रभावित छ । लहर उठ्छ सुखको, दुःखको । हाम्रो चित्त बाहिरबाट प्रभावित नहुने अवस्था हो, आनन्द । सुख र दुःख भन्ने अनुभूति बाहिरबाट आएको हो । आनन्द त्यो अनुभूति हो, जो बाहिरबाट केही पनि आउँदैन । आनन्द बाहिरको अनुभव नभएर स्वयंको अनुभव हो ।
त्यसैले सुख र दुःख हराउन सक्छ । किनभने यी बाहिरी कुरा हुन् । बाहिरबाट आउने कुरा हुन् । कुनै व्यक्ति सुखी थियो, कुनै कारणले थियो । उक्त कारण हटाइदिएपछि उनी दुःखी हुनेछन् । आनन्द निःकारण छ । यसैले बाहिरी कुराले आनन्दलाई नष्ट गर्न सक्दैन । हटाउन वा हराउन सक्दैन । अर्थात् सुख अस्थायी हो, दुःख अस्थायी हो । आनन्द भने स्थायी हो ।
आनन्द नित्य हो । सुख पनि परतन्त्र हो, दुःख पनि परतन्त्र हो । किनभने यसमा अर्काको हात हुन्छ । आनन्द स्वतन्त्र हो । दुःख बन्धन हो, सुख पनि बन्धन हो । आनन्द मुक्ती हो ।
तब आनन्द मनुष्यको आफ्नो चैतन्यको स्थिति हुनेको नाम हो । सुख मिल्छ, दुःख मिल्छ । आनन्द मिल्दैन । आनन्द उपस्थित छ, केवल बुझ्नुपर्छ । सुख पाउने हो, दुःख पनि पाउने हो । तर, आनन्द पाउने होइन । केवल आविष्कार गर्नुपर्छ, केवल अन्वेषण गर्नुपर्छ । त्यो उपस्थित छ । बुझ्नुहोस् कि जुन चिज पाइन्छ, त्यो हराउँछ पनि । आनन्द हराउँदैन । किनभने यो पाइने कुरा होइन । आफैंभित्र रहेको कुरा हो ।
आनन्दको सम्बन्धमा दुई स्थिति छ, एक आनन्दप्रति ज्ञान र आनन्दप्रति अज्ञान ।
महावीरलाई, बुद्धलाई, क्राइस्टलाई जुन आनन्द मिल्यो त्यो आफैंभित्र उपस्थित थियो । हामीभित्र र उनीहरुभित्र बीचको आनन्द दृष्टिले भेद छैन । भेद ज्ञानको दृष्टिले हो । महावीरलाई जुन आनन्द मिल्यो, त्यो तपाईंभित्र पनि छ । तर, त्यो कुरा हामीलाई किन बोध भएन जुन महावीरलाई भयो ?
मान्छेले सुख र दुःखको बोध गर्छ, तर किन आनन्दको बोध गर्न सक्दैन ? किनभने सुख र दुःख बाहिरी हो । मान्छे बाहिरी कुरामा अल्झिएको छ । भित्र प्रवेश गर्ने फुर्सद नै छैन ।
जब सुखबाट हट्नुहुन्छ आनन्दमा प्रवेश गर्नुहुन्छ । त्यो साधना होइन, सामान्य चित्तको भाव हो । दुःखबाट हट्न चाहनु भनेको उनको आकंक्षा सुख हो । जो सुखबाट हट्न चाहन्छ उसले भने आनन्दमा प्रवेश गर्न सक्छ ।
– ओशोधारा ब्लगबाट भावानुवाद
पारिजातको बिरुवा रोपेर जयशंकरले गरे पशुपतिमा पूजा
५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गरेका छन् । उनले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पारिजातको बिरुवा पनि रोपेका छन् ।
पारिजातको बिरुवा रोपिसकेपछि उनले पशुपतिको दर्शन गरेका थिए । जयशंकरसँगै नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी पनि पशुपति मन्दिर गएका थिए ।
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका जयशंकरले केहीबेरपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शितलनिवासमा भेट्ने र दिउँसो तीन बजे स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । उनले बुधबार नेपाल आएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
कान्ति लोकपथमा ढिलाइ, पहिरोले ३० करोड खर्च थपियो
५ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग कान्ति लोकपथको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा पनि नसकिने भएको छ । यद्यपि, यसै आवमा ठूला सवारीका लागि भने सडक खुला गरिने तयारी छ ।
दशैंसम्म ठूला सवारी चलाउने गरी निर्माण भइरहेको सडकमा वर्षाले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि लक्षित समयमा सक्न समस्या परेको कान्ति लोकपथ आयोजनाका प्रमुख विनोद सापकोटाले बताए । आयोजनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा यो सडकमा कठिन चट्टाने पहिरो रहेको ५ किलोमिटरबाहेक सबै खण्डमा कालोपत्रे सकिनेछ ।
बाँकी ५ किलोमिटर खण्डमा पनि सहज खालको ट्रयाक बनाएर अर्को आर्थिक वर्षमा आयोजनाको काम टुंग्याइने आयोजनाका प्रवक्ता अमिन्द्र खड्काले जानकारी दिए । यो वर्षामा विभिन्न भागमा सडक भासिएर तथा सडकमा पहिरो आएर ठूलो क्षति भएकाले त्यसले पनि ठूलो नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले लागेको ठेक्का बाहेकको काम गर्न नै करिब ३० करोड खर्चनुपर्ने भयो,’ उनले भने ।
हालसम्म यो सडक खण्डको ७९ किलोमिटरमध्ये ४५ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे भइसकेको छ । अरु २७ किलोमिटर खण्डको काम यसै वर्ष गर्ने र करिब ५ किलोमिटर खण्डको कालोपत्रे अर्को आर्थिक वर्षमा गरेर आयोजनालाई पूर्णता दिने योजना बनाइएको छ ।
‘सकेसम्म दशैंअघि नै यो रुटमा ठूला सवारी आवागमन खुला गर्ने योजना हो, तर सकिएला जस्तो छैन,’ खड्काले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा ठूला मालबाहक र यात्रुबाहक सवारीलाई सञ्चालन योग्यचाहिँ बनाउँछौं ।’
६२ वर्षअघिको योजना
यो सडकका लागि ०१४ सालमा ट्रयाक खोल्न सुरु गरे ०१६ मा काम सकिएको थियो । तर, त्यसपछि बाग्मती खोलामा पुल नबन्दा र केही चट्टाने भीरको क्षेत्रमा सडकको अवस्था नसुधार्दा करिब ५० वर्ष यो सडक अलपत्र नै रह्यो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बल्ल यो मार्गको निर्माणमा सरकारले चासो देखायो । त्यसअनुसार निर्माण सुरु भएको ६० वर्षपछि यो राजमार्गमा कालोपत्रे सुरु भएको हो । हालसम्म आयोजनाले मकवानपुरतर्फ ३० र ललितपुरतर्फ १५ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको दशैंमा नै सडकको निर्माण सक्ने भनिए पनि विष्फोटक पदार्थ अभावको कारण ढिलाइ भएको थियो ।
हाल आयोजनाले चट्टानयुक्त सडक क्षेत्रका लागि दुई वटा छुट्टै ठेक्का लगाएर ट्रयाक सहज बनाउने काम गरिरहेको छ । अन्य ट्रयाक खुलिसकेका खण्डमा कालोपत्रे गरिँदैछ ।
यो बाटो बनेपछि हेटौंडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने २२६ किमी र पालुङ हुँदै आउने १२६ किलोमिटर बाटोको विकल्प तयार हुनेछ । ०६४ मा ब्युँतिएको यो आयोजनाले हालसम्म २ अर्ब ५१ करोड खर्च गरेको छ ।
यो आयोजना सकिँदासम्म साढे ३ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । यो वर्ष मात्रै आयोजनाले ६० करोड बजेट पाएको छ । गत वर्ष ६७ करोड खर्च भएको थियो ।
काठमाडौंबाट कान्ति लोकपथको प्रस्थान विन्दु ललितपुरको सातदोबाटो हो । हेटौंडाको बुद्धचोकदेखि ललितपुरको सातदोबाटोसम्मको यो सडकलाई विस्तार गरी ८ दशमलव ५ मिटर चौडा गर्न काम भइरहेको छ । यो सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कोरियाको सरकारी कम्पनीले तयार गरेको थियो ।
कान्ति राजपथ निर्माण सकिएपछि ललितपुरका दुर्गम दक्षिणपूर्वी भेग र मकवानपुरको पूर्वोत्तर भेगका बासिन्दाको जीवनयापनमा सुधार आउने स्थानीयको अपेक्षा छ । वीरगन्ज नाकाबाट नेपाल तथा भारतबीच हुने व्यापार विस्तारमा समेत यसले सहयोग पु‍र्‍याउने विश्वास गरिएको छ । यसले पूर्वी नेपाल र वीरगञ्जबाट हुने काठमाडौंको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्नेछ ।
नयाँ शोधः यी देशका मानिस सुत्छन् गहिरो निद्रामा
पोषिलो खाना, पानी, अक्सिजन जत्तिकै अपरिहार्य छ निद्रा पनि । निद्रा र स्वास्थ्य आपसमा जोडिएको छ । गहिरो निद्रा स्वास्थ्य शरीरको सूचक हो । जो गहिरो निद्रा सुत्छन्, उनीहरुको स्वास्थ्य ठीक छ भन्ने संकेत मिल्छ ।
यद्यपि अहिले हाम्रो निद्रा विथोलिएको छ । हामी आनन्दपूर्वक सुत्न सक्दैनौं । एक त निदाउने अवधी छोटिएको छ, अर्कोतिर निदाएको बखत पनि हामी गहिरो निद्रामा पुग्न सकिरहेका छैनौं । त्यही कारण अहिले धेरैले निद्राको औषधि खानुपर्ने बाध्यता छ ।
हामी नेपाली कति गहिरो निद्रामा सुत्छौं ? सायदै लेखाजोखा भएका होलान् । हालै एक सर्वेक्षणले भने छिमेकी मुलुक भारतका नागरिक रातिमा सबैभन्दा गहिरो निद्रामा सुत्ने उल्लेख गरेको छ । फिलिप्सका ग्लोबल मार्केट रिसर्च र्फम केजेटी ग्रुपको हालैको सर्वेले उक्त नतिजा देखाएको हो ।
भारतपछि उत्तरी छिमेकी चीनका नागरिक गहिरो निद्रामा सुत्छन् । साथै साउदी अरबका नागरिक पनि गहिरो निद्रामा सुत्ने जनाइएको छ ।
ग्लोबल मार्केट रिसर्च र्फम केजेटी ग्रुपले १२ देशलाई यस सर्वेक्षणमा समेटेको थियो । उक्त देशका १८ वर्ष र त्यसभन्दा माथिका मानिसहरु सर्वेक्षणमा संलग्न थिए । कुल ११ हजार ६ जनामाथि सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा के पाइयो भने विश्वभरका ६२ प्रतिशत वयस्क जब राति सुत्न जान्छन्, उनीहरु गहिरो निद्रामा पुग्नै सक्दैनन् ।
अनिद्राको समस्या सबैभन्दा बढी दक्षिण कोरियामा
अनिद्राको समस्या सबैभन्दा बढी दक्षिण कोरियामा छ । दक्षिण कोरियाका नागरिकहरु राम्ररी निदाउन सक्दैनन् । यसैगरी जापानको हालत पनि त्यस्तै छ । विश्वको वयस्क हप्तामा रातको क्रममा ६ दशमलव ८ घण्टा निद्रा लिन्छन् । त्यसैगरी विदाको दिन राति ७ दशलमव ८ घण्टा निद्रा लिन्छन् ।
सर्वेमा के पाइयो भने प्रत्येक दिन आठ घण्टाको निद्रा पुरा गर्ने १० वयस्क (६३ प्रतिशत) सप्ताहन्तमा अधिक सुत्ने गर्छन् । १० मध्ये चार जनाले भनेका छन् कि उनीहरुलाई पछिल्लो पाँच वर्षयता राम्ररी निद्रा परेको छैन ।
२६ प्रतिशत मानिसले मात्र आफ्नो निद्रा गहिरो भएको बताएका छन् । जबकी ३१ प्रतिशले आफ्नो निदाउने बानीमा कुनै परिवर्तन नआएको बताएका छन् । फिलिप्स ग्लोबल स्लीप सर्वे २०१९ का अनुसार क्यानडा (६३ प्रतिशत) र सिंगापुर (६१ प्रतिशत) मा मानिसमा सबैभन्दा बढी अनिद्राको समस्या छ ।
किन विथोलिदैछ निद्रा ?
किन मान्छेको निद्रा विथोलिदैछ ? यसमा खराब जीवनशैली मुख्य कारण बनेको छ । खासगरी यी पाँच कारणले निद्रा विथोलिने देखिन्छ- चिन्ता, तनाव (५४ प्रतिशत), पर्यावरण (४० प्रतिशत), कार्य वा विद्यालयको शेड्युल (३७ प्रतिशत), मनोरञ्जन (३६ प्रतिशत) र स्वास्थ्य कारण (३२ प्रतिशत) छ ।
५ भदौ, मंगलसेन । अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका ५ मा जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने चालकसहित दुई जना घाइते भएका छन् ।
कैलालीको रामारोशनबाट जयगढ जाँदै गरेको से १ ज ९९५ नम्बरको जिप गएराति करिब सवा आठ बजे कालिकालिडी सुकीबाग भन्ने स्थानमा सडकबाट करिब ७ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको थियो ।
अवैध रूपमा बालुवा निकासी गर्ने ट्र्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा
By नेपाली कान्छा on 7:51 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
५ भदौ, खोटाङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, खोटाङले नदीबाट अवैधरूपमा बालुवा निकासी गरिरहेको अवस्थामा सात ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बालुवा लिएर आउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले ना ४ त ९१७२, को २ त ८२३८, ना ४ त ९६५५, ना५त ६६८३, को २ त १३८४ र को १ त ३८१२ नम्बरको ट्र्याक्टरसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक बामदेव गौतमले बताए ।
बुधबारदेखि अवरुद्ध पासाङल्हामु राजमार्ग खुल्यो
By नेपाली कान्छा on 7:46 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
५ भदौ, काठमाडौं । मालवाहक कन्टेनर दुर्घटना भई सडकमै पल्टिएपछि बुधबार बिहानैदेखि अवरूद्ध पासाङल्हामु राजमार्ग खुला भएको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार, चीनको केरूङबाट आयात भएको रेडिमेट मालवस्तु लिई काठमाडौंतर्फ जाने क्रममा ना२ख ३८१६ नंको डिब्बा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ को १२ धुम्ती पुछार राजमार्गको बीच भागमा ब्रेकफेल भई दुर्घटना भएको थियो ।
राजमार्ग खुला भएलगत्तै रोकिएका दर्जनौं सवारीसाधन आफ्नो गन्तव्यतर्फ गइसकेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । राजमार्ग खोल्न मद्दतका लागि ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख भाग्येन्द्रपुरूष ढकालले बताए ।
अहिले हाम्रो खानपान शैली एकदमै खराब छ । हाम्रो खाना स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि स्वादका लागि हुने गर्छ । त्यसैले हामी चिल्लो, पिरो, अमिलो, मसलेदार, तारेको, भुटेको, प्याकेटबन्द खानेकुरा खाने गर्छौं । कति खाने र कसरी खाने भन्ने कुरामा हामीलाई खासै हेक्का पनि छैन । भोक लागेको बेला होस् वा आफूलाई मिठो मसिनो लागेको बेला, पेट चर्कने गरी खाइदिन्छौं । खानामा हाम्रो कुनै नियन्त्रण छैन । बस् मिठो भएपछि पेट अटसमटस हुने गरी खाइदिन्छौं ।
अहिले बजारमा थरीथरीका तयारी खानेकुरा उपलब्ध छ । महिनौंअघि तयार गरिएका यस्ता खाद्यपदार्थ पनि हामी छिटो र छरितोका लागि खाने गर्छौं । त्यसैगरी सडकमा बेच्न राखिएका वा रेष्टुरेन्टका खानेकुराले पनि हामीलाई लोभ्याएको छ । हामी खानेकुरा खाएरै रमाइलो गर्ने गछौर््रं र यस क्रममा जतिपनि, जस्तो पनि खानेकुरा खाइरहेका हुन्छौं ।
१० दिनपछि फेरि सिंगापुर जाँदै प्रधानमन्त्री
By नेपाली कान्छा on 7:36 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
५ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज सिंगापुर जाने भएका छन् । सिंगापुरमै स्वास्थ्य परीक्षण गराएर गत साउन २७ गते फर्किएका प्रधानमन्त्री ओली १० दिनपछि फेरि त्यसतर्फ जान लागेका हुन् ।
चिकित्सकको सल्लाहअनुसार प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार दिउँसो साढे १ बजे थाई एयरमार्फत सिंगापुर प्रस्थान गर्न लागेको उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ओलीसँगै प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहलगायत पनि सिंगापुर जाने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने छन् । यसअघि पनि उनले त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए । अघिल्लोपटक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नौ दिन सिंगापुरमा बिताएका प्रधानमन्त्री ओली यसपटक कति समय त्यहाँ रहन्छन् भन्नेबारे केही पनि बताइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौलाको विरामी हुन् । उनले १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि भारत र बैंकक गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका प्रधानमन्त्रीले बीचमा स्वदेशमै उपचार गराएका थिए । तर, उनी गत साउन १८ गते सिंगापुर गएका थिए ।
मिर्गौला प्रत्योपणका विरामीहरुले निश्चित समयपछि औषधि परिवर्तन गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । कतिपयले१२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि औषधि परिवर्तन गर्नुपरेको छ । नयाँ औषधिले काम नगरे नयाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने विकल्प रहन्छ । ओलीले के गर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयं र उनको सचिवालयले पनि स्वास्थ्यबारे विस्तृतमा केही जानकारी दिएका छैनन् ।
By नेपाली कान्छा on 7:26 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
साइक्लिङका यति धेरै फाइदाहरु भएपछि तपाईं-हामी पनि आजैदेखि साइक्लिङ गर्न थाल्ने कि ?